Ciidankii NISA ee lagu biiriyay Booliska oo Durbadiiba shaqo b... | Universal Somali TV
Ciidankii NISA ee lagu biiriyay Booliska oo Durbadiiba shaqo bilaabay.
Ciidankii Nabad Sugidda Somaliya ee dhawaan lagu xareeyay xarunta Xisbiga ee horey uga hawlgeli jiray magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoysyada ayaa lagu biiriyay ciidanka Booliska Soomaaliya.
Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii Taliyaha Ciidanka Booliska qeybta gobolka Banaadir loo magacaabay dhawaan Taliyihii hore ee Nabad Sugidda gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon).
Isgoysyada qaar ee magaalda Muqdisho oo ay ka mid yihiin KM4, Taleex iyo Dabka ayaa lagu arkayaa ciidankii Nabad Sugidda oo loo xiray dareeska Booliska, kuwaasi oo ka qeyb qaadanaya sugidda ammaanka magaalada Muqdisho.
Ciidamadan ayaa gaadiidka yar yar qaarkood weydiinaya su’aalo kooban oo dhanka ammaanka la xiriira, waxayna si aad ah ula socdaan dhaq dhaqaaqa ka jira isgoyada ay joogaan.
Saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen ciidanka Nabad sugidda qeybtood in la xareeyay oo tababar dib loogu bilaabay halka qaarka kale oo lagu biiriyay Booliska ay shaqo bilaaben.
Dowladda federalka Somaliya ayaa qorshahan waxay u aragtaa mid wax weyn ka bedeli kara ammaanka magaalada Muqdisho, maadaama ciidankan uu maamulo Saadaq Joon oo in badan ka soo shaqeeyay hawlaha Nabad Sugidda, ahna nin aad u ad adag.
Tan iyo markii ammaanka magaalada Muqdisho lagu wareejiyay Ciidanka Boolis Millataria ayaa waxaa dhacay Hal qarax oo weyn oo Ururka Al Shabaab ay ku weerareen Maqaaxida Somali Coffee oo ku taalla wadada Maka Al Mukarama, qaraxaasi waxaa ku naf waayey dad ku dhaw 5 qof.
Kan-xigaSacuudiga oo dib u soo celiyay 27,000...
Kan-horeHal ruux oo ku geeriyooday duqeyn diy...
40,455,849 unique visits